HomePods waxay la jaan qaadi doonaan Lossless ka Apple Music | Waxaan ka socdaa mac
HomePods waxay la jaan qaadi doonaan Lossless ka Apple Music
Ma ahan maalmo badan kahor Apple waxay soo bandhigtay tayada maqalka ee Apple Music. Dhinac waxaan ka heleynaa codka maqalka iyo dhanka kale, maqal la'aanta ama Khasaaraha. Astaamaha u oggolaanaya inay la tartamaan adeegyada qaabka sida Tidal. Laakiin sidoo kale waa in Apple ay hirgelisay iyada oo aan kor loo qaadin qiimaha diiwaangelinta sidaas darteed waa horumar wanaagsan. Hadda waa la ogyahay in HomePods waxay lahaan doonaan shaqeyntaas la software cusub.
Iyadoo loo marayo cusbooneysiinta barnaamijka, HomePods, iyadoon loo eegin nooca, waxay lahaan doonaan awood ay ku ciyaaraan Apple Music cod maqal la'aan ah ama lumiya. Shaqeyn cusub oo dhowaan la soo bandhigay, nasiib darro iyo sidaan horeyba u ognahay, kuma habboonayn moodooyinka Airpods. Xitaa maaha AirPods Max kaas oo loo baahan lahaa fiilo si looga faa'iideysto shaqeyntaas.
Hillaaca illaa 3,5mm fiilada codka ayaa loogu talagalay inay u oggolaato AirPods Max inuu ku xirmo ilaha analogga ee dhageysiga filimada iyo muusikada. AirPods Max wuxuu ku xirnaan karaa aaladaha u ciyaara xallinta sare ee duubista bilaa lumista iyo luminta leh oo leh tayo maqal oo aan caadi ahayn. Si kastaba ha noqotee, marka la eego isku-beddelka analog-illaa-dijitaalka ah ee fiilada, dib loo ciyaaro gabi ahaanba khasaaro ma noqon doonto.
Si kastaba ha noqotee, HomePods ayaa ka faa'iideysan kara khibraddaas maqalka ah ee cusub. In kasta oo markii hore, HomePod iyo HomePod mini aysan la jaan qaadi karin Apple Music Lossless, laakiin waxay taageero u lahaan lahaayeen Dolby Atmos ama maqalka maqalka. Taasi waa, inaad awood u leedahay inaad abuurto waayo-aragnimo seddex-geesood leh oo isku dhejinaya muusigga guud ahaan dhegeysiga. Apple Music Lossless waxay siisaa dhagaystayaasha maqal tayo sare leh.
Bishii Juun, Apple waxay siin doontaa Macaamiisha Apple Music Heerka "Heerka" Apple Music Lossless oo leh maqal ilaa 48kHz, iyo "Hi-Res Lossless" oo leh cod u dhexeeya 48kHz iyo 192kHz. Hi-Res Lossless waxay u baahan tahay qalab dibedda ah sida USB-ga beddelaha dijitaalka ah-ee-analog.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » HomePods waxay la jaan qaadi doonaan Lossless ka Apple Music
Hi-Fi on Apple Music, iMac 24 "iyo wax badan oo dheeraad ah. Ugu wanaagsan usbuuca waxaan ka imid Mac
Apple waxay soo saartay bog cusub oo ah "Why Mac" si kor loogu qaado kumbuyuutaradiisa